जल्दैछ पृथ्वीको ‘फोक्सो’ – जिम्मेवार हामी मानिस हौँ ! – DK
Home / विश्व / जल्दैछ पृथ्वीको ‘फोक्सो’ – जिम्मेवार हामी मानिस हौँ !
By digitalkhabar on August 25, 2019
अमेजोन जलिरहेको छ – यसको दोष मानिसलाई नै जान्छ ।
वातावरणसम्बन्धी काम गर्ने संस्था तथा अनुसन्धानकर्ताले ब्राजिलको जङ्गलमा त्यसलाई फडानी गरेर जमिन उपयोग गर्न चाहनेहरुले डढेलो लगाएको दाबी गर्छन् । जसलाई व्यापारीलाई समर्थन गर्ने ब्राजिलकै राष्ट्रपतिले प्रोत्साहन गरिरहेका छन् ।
‘यीमध्ये धेरै डढेलोले मानिसले नै सल्काएका हुन्,’ गैरनाफामुलुक संस्था अमेजोन वाचका निर्देशक क्रिस्टियन पोइरिर भन्छन्् । सुख्खा मौसममा समेत ओसिलो रहने अमेजोनको (रेन फरेस्ट) घना जङ्गलमा सजिलै आगो नसल्कने उनको भनाइ छ । त्यहाँ क्यालिफोर्निया र अस्ट्रेलियामा जस्तो सुख्खा झाडीयुक्त जमिन छैन ।
यो सिएनएनबाट भावानुवाद गरिएको हो ।#अमेजोन
Related ItemsAmezon Forest FireBusinessDigital KhabarFireInternationalNepal
Next Story → राहुल गान्धी र अन्य विपक्षी नेतालाई श्रीनगरको विमानस्थलबाटै फर्काइयो